China 3D 3D Curved welded waya nsu, na-ewu ewu weld ntupu ngere dị ka nchekwa fencing nke obibi na North American Manufacturer na Supplier | Oghere
PRO.FENCE na-arụpụta ma na-ekesa ọtụtụ eriri waya waya weld maka izute ọtụtụ ngwa. Ezubere 3D a welded weld ntupu ngere maka obibi. Ọ na-mere si ígwè waya na waya dayameta bụ ruo 5mm mgbe mkpuchi. Wires jikọtara ọnụ iji mepụta ntupu nke 75 × 150mm, na -emepụta ihe mgbochi siri ike ma na-adịgide adịgide. The dum ntupu panel bụ banyere 2.4m elu na 4 zita curved na ya dị elu dị ka fencing usoro nke ụlọ.
PRO.FENCE na-enye ụdị a ụdị 3D Curved welded waya nsu na electrostatic ntụ ntụ ntekwasa nke na-adị mma karịa n'elu. Ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ mkpuchi PVC iji chekwaa ego. Oghere waya waya a na-eji square post na clamps gbakọta nke dị mfe ịrụcha.
Ọ bụ ezigbo ngere maka ụlọ obibi.
Ntupu: 150 × 50mm
Biputere: post post
Ntọala: ihe mgbochi
Emechara: Electrostatic ntụ ntụ ntekwasa / ịkwanyere ntekwasa (Brown, Black, White wdg)
1) Ogologo oge oru
Emere ya site na waya nchara di elu banyere 5mm na dayameta na mkpuchi uzuzu electrostatic banyere 120g / m2. High ike waya na elu corrosion ekwe nkwa ogologo ọrụ ndụ.
2) Chịkọta ọnụ ngwa ngwa
Ọ na-agụnye ntupu ntaneti, posts ma jikọta ya ọnụ. Ọdịdị dị mfe ga-enyere aka wụnye ngwa ngwa na saịtị.
Ngwunye ígwè a siri ike nwere ike ịmepụta ihe nchebe maka ihe onwunwe gị.
Nkebi Nke.: PRO-03 Ebute :bọchị: -21BỌCH 15 15-21 Nbanye ngwaahịa: CHINA
Nke gara aga: M ekara kpaliri welded ntupu ngere N'ihi Solar Plants
Osote: 358 Ogwe mkpuchi waya dị elu maka ngwa ụlọ mkpọrọ, na-agba ụlọ maka nchedo ihe onwunwe
M ekara kpaliri welded ntupu ngere (One-piec ...